चितवनका सीडीओ भन्छन्- एमाले महाधिवेशनमा त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्थापन गर्छौं [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ मंगलबार, मंसिर ७, २०७८, १४:५१
नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुँदैछ। उद्घाटन सत्र नारायणी नदीको किनारमा आयोजना गरिनछ भने बन्दसत्र पर्यटकीय नगरी सौराहमा हुनेछ। एमालेको महाधिवेशनमा ठूलो जनसहभागिता हुने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थापन पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। एमालेको महाधिवेशनलाई ध्यानमा राख्दै जिल्लामा समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भनेर चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी :
एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। सुरक्षा तयारी कसरी भइरहेको छ?
नेकपा एमालेले महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि हामीले सरोकारवालाहरुसँग पटक पटक छलफल गर्‍यौं। त्यसबाट हामीले एउटा निष्कर्ष निकालेका छौं। हामीले महाधिवेशनको सुरक्षामा दुई किसिमले हेरेका छौं। एउटा ट्राफिक व्यवस्थापनको र समग्र सुरक्षाको हिसाबले हेरेका छौं। ट्राफिक व्यवस्थापनका हिसाबले मूलभूत रुपमा तीन ठाउँ पश्चिम नेपाल, काठमाडौं र कास्कीबाट आउने एउटा बाटो र अर्को पूर्वी नेपाल रहेको छ। यी तीनवटा बाटोबाट हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न १३ वटा ठाउँहरुमा पार्किङको व्यवस्थापन गर्दैछौं।
दोस्रो, सुरक्षाको दृष्टिकोणले उद्घाटनको दिन धेरै मानिसहरुको आवतजावत हिँडडुल भएको हुनाले सबैभन्दा ठूलो कुरा १० गते उद्घाटन सत्रका लागि भनेर विशेष सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गरेका छौं। पहिलो नम्बरमा नारायणी पूलबाट पूर्व, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोकबाट पश्चिम र आपटारीबाट दक्षिणतर्फ अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउछौं। कार्यक्रम स्थलमै केन्द्रित गर्छौं।
बन्दसत्र हुने स्थान सौराहको सेभेन स्टार होटलमा हुने हो। त्यो सुरक्षाका हिसाबले पर्याप्त जनशक्तिले पनि सहज रुपले व्यवस्थापन गर्न सकिने भयो। त्यसका लागि केही ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति नपुग भएको देखिन्छ। त्यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट एकीकृत सुरक्षा रणनीतिका साथ ट्राफिकको माथिल्लो निकायसँग थप जनशक्ति मागेका छौं। करिब ८० जना जनशक्ति थप हुनेछ।
सशस्त्र प्रहरी २ सय भन्दा बढी प्रदेशसँग मागेका छौं। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको पनि २ सय भन्दा बढी नै जनशक्ति माग गर्छौं। ती जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र सवारी जिल्लाका कार्यालयबाट मिलाउँछौं। त्रुटिरहित सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीतिका साथ काम गरिरहेका छौं।
भीभीआईपी, भीआईपी लगायतका विदेशी पाहुना पनि सहभागी हुने भनिएको छ। त्यसका लागि पनि त आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ला।
भीभीआईपी र भीआईपीको मुभमेन्टको लागि हामीले निश्चित बाटो तय गरेका छौं। हवाइजहाज, हेलिकोप्टर र सवारी साधनबाट आउनेहरुको निश्चित रुट बनाएका छौं। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई नै निम्तो छ। उहाँ आउनु भयो भने उहाँ अनुसारको व्यवस्था गरेका छौं। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको त्यसै अनुसार गरेका छौं। हामीले जानकारी पाए अनुसार धेरै देशका डेलिगेट्स् आउने भन्ने छ। उहाँहरु आउनुभयो भने पनि त्यसै अनुसार उहाँहरुलाई सुरक्षित रुपमा कार्यक्रम स्थल पुर्‍याउनका लागि हामीले छुट्टै रुपमा लाने व्यवस्था गरेका छौं।
उद्घाटन सत्रमा ठूलो जनसहभागिता हुने भनिएको छ। आसपास क्षेत्रमा कठिनाइ त होला नि?
यसमा हामीले आमनागरिकलाई अनुरोध पनि गर्छौं। सम्बन्धित जिल्ला मूलभूत रुपमा पश्चिम रुपन्देही र पूर्व-पश्चिम नवलपरासी, पूर्वबाट चाहिँ मकवानपुरलाई अनुरोध गर्ने पक्षमा पनि छौं। त्यो दिन चाहिँ जति मालबाहक र यात्रुबाहक सवारी तिनलाई होल्ड गर्न अनुरोध गर्छौं। पूर्वी नेपालबाट चाहिँ हामीले डाइभर्सन बनाएका छौं। एउटा टाँडीबाट र अर्को बाइपास काठमाडौं बनाएका छौं। मकवानपुरलाई पनि हामीले के भनेका छौं भने कमसेकम सवारी साधनलाई १० देखि ५ बजेसम्म होल्ड गरिदिनुस्। आमनागरिकलाई पनि १० देखि ५ बजेसम्म वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरिदिन हामीले अनुरोध पनि गरेका छौं।
पर्यटकीय नगरीमा ठूलो कार्यक्रम हुँदै गर्दा यसले कतिको महत्त्व राख्छ ?
स्वभाविक रुपमा चितवन पर्यटकीय नगर पनि हो। अरु बेला पनि मानिसहरु आउने गर्छन्। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु यहाँ आउनुहुन्छ। बस्ने व्यवस्थापनको लागि यहाँ असहज कहीँ हुँदैन। सौराह आफैं पनि पर्यटकीय क्षेत्र हो। पश्चिम चितवन छ। नारायणघाटमै छ। जति पनि पर्यटक लगायतका आगन्तुकहरु आउनुहुन्छ। उहाँहरुको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त होटलहरु छन। त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन कसरी हुन्छ? समन्वय कसरी भइरहेको छ?
जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति छ नै। गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफल अनुसार बागमती प्रदेशका डीआईजीको नेतृत्वमा नै नेपाल प्रहरीको कमान्ड खटिने छ। सशस्त्र प्रहरीको पनि हुनेछ। कलस्टर अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अपुग भएको अवस्थामा एकीकृत सुरक्षा रणनीति अनुसार जनशक्ति माग गरेका छौं। मंसिर ९ गते नै हामीले जनशक्ति प्राप्त गर्नेछौं। त्यसअनुसार १० गते परिचालन गर्नेछौं। शान्तिपूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्णरहित सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेछौं।
राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उच्च अदालतको आदेश उच्च अदालत पाटनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति (शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी) राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको पाइए कारबाही गर्न आदेश जार... आइतबार, मंसिर १९, २०७८